Kooxdii weerartay Tahraan 'waxay ahaayeen Iiraaniyiin u shaqeynayay IS' - BBC News Somali
Kooxdii weerartay Tahraan 'waxay ahaayeen Iiraaniyiin u shaqeynayay IS'
Image caption Kaddib saacado ay xabado ka dhacayeen baarlamaanka Iiraan, ayaa saraakiishu waxa ay sheegeen inay dhinteen dhammaan dadkii weerrarka soo qaaday
Ku xigeenka taliyaha Golaha Sare ee Ammaanka Qaranka Iiraan, Reza Seifollahi, ayaa sheegay in weerrarkii Arbacada ee ay maleeshiyaadka ku ekeeyeen caasimadda Tahraan kuna dhinteen 12-ka qof ay qaadeen dad u dhashay Iiraan oo ku biiray ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah.
Wareysi uu siiyay taleefishinka qaranka, ayuu Reza Seifollahi, ku xigeenka Golaha Sare ee Ammaanka Qaranka Iiraan, ku sheegay in kooxda weerarka qaadday "ay Daacish [IS] uga biireen dhowr gobol oo ku yaal Iiraan."
Dad ismiidaamiyay ayaa weeraray baarlamaanka iyo qabriga weyn ee uu ku aasan yahay aasaasaha Dowladda Islaamiga ah ee Iiraan ee Ayatollah Khomeini.
Waxaa la dilay dhammaan kooxdii weerarka soo qaadday. Shan qof oo la rumaysan yahay inay qorshaynayeen inay qaadaan weerar saddexaas ayaa la xiray, sida ay saraakiishu sheegeen.
Ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa Sucuudi Carabiya iyo Mareykanka waxa ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen weerrarada.
Hasayeeshee Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sucuudiga ayaa sheegay in Iiraan aanay hayn caddeyn ay ku taageerto waxa ay sheeganayso.
Weerarkan ayaa imanaya xilli ay xiisad ba'an ka taagan tahay Bariga Dhexe, oo Sucuudi Carabiya iyo dalal kale oo carbeed ay xiriirkii u jareen dalka Qadhar oo lagu eedaynayo inuu taageero maleeshiyaadka Islaamiga ah xiriir dhawna ay la leedahay Iiraan.